(1) kusarudzwa kwemidziyo. Kune mamwe matambudziko mukusarudzwa kwemidziyo yemishonga, senge kusarudzwa neruzivo (pasina kuverenga chaiko, kana kukwana data kukarukureta), kutsvaga bofu kwekufambira mberi, uye kusakwana kwekuongororwa kwedata remuviri, iro rinokanganisa zvakanyanya ...
I. michina yekukatanura Kugadzirira usati wabvarura A. nzvimbo yekushandira inofanira kunge yakakura, yakajeka, inotsvedzerera uye yakachena. B. Midziyo yekukatanura yakagadzirirwa zvizere nematanho akakodzera. C. Gadzirira tafura, uchiganhura bheseni uye dhiramu remafuta pazvinangwa zvakasiyana Maitiro ekutanga eMec ...
ne admin pane 20-02-27
(1) shandisa "kukosha kweinjiniya nzira" kutenga michina, iwo maitiro akajeka anotevera. Bvisa zvinodiwa, sarudza iyo sarudza uye tenga zvigadzirwa - tarisa bhizinesi ruzivo (ruzivo rwunosanganisira: mashandiro mutemo, manejimendi chinangwa, chiyero chekugadzira uye ma ...